Ny Huawei Mate 30 tsy misy fampiharana Google: Izay rehetra tokony ho fantatrao | Vaovao momba ny gadget
Ny Huawei Mate 30 tsy misy fampiharana Google: Izay rehetra tokony ho fantatrao
Eder Esteban | | Finday, telephony
Ny alakamisy lasa teo dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny karazana Huawei Mate 30 vaovao, miaraka amin'ireo findainy vaovao roa. Na eo aza ny masonkarena tsara, endrika tsara na fakan-tsary tsara, dia ny tsy fisian'ny rindranasa Google sy ny serivisy Google Play inona no nahazo ny lohateny lehibe indrindra tamin'ity tranga ity, ary koa ny fampiasana ny kinova Android open source.
Ny fanakanana izay iharan'ny orinasa any Etazonia Zavatra iray misy fiatraikany tanteraka amin'ity faritry ny Huawei Mate 30. Noho io antony io dia voatery mampiasa finday Android open source ireo finday ary tsy misy fampiharana na serivisy Google misy.
1 Tsy misy Google Apps sy serivisy Google Play
2 Inona no ananan'ny Huawei Mate 30?
3 Android Source Open
4 HarmonyOS amin'ny maha rafitra miasa azy
Tsy misy Google Apps sy serivisy Google Play
Ny Google Apps dia tsy ho tonga tampoka amin'ny finday, zavatra efa re tato ho ato. Tsy hisy ny fametrahana ny serivisy Google Play amin'ireto maodely ireto voajanahary ao amin'ireto Huawei Mate 30. Midika ireo fa tsy manana Google Play, fivarotana fangatahana, na fampiharana toa ny Maps, Gmail na Assistant izay apetrakao ireo finday. Ankoatr'izay, tsy afaka nakarina tamin'ny voalohany izy ireo.
Na dia avy amin'ny Huawei aza dia voamarina fa ho mora kokoa ny fidirana amin'izy ireo, saingy ny fomba hanatanterahana izany dia tsy voalaza mazava. Ny Huawei Mate 30 dia tsy ho finday voalohany eny an-tsena izay tsy manana serivisy Google Play. Modely mariky ny marika sinoa maro no tonga tsy misy azy ireo, io ihany no sarotra ny fametrahana azy, na dia hamaha ny bootloader aza ny marika sinoa, ka tokony ho azo atao izany.
Noho izany, ny telefaona dia tsy hanana azy ireo amin'ny toerana naterany. Ny fandefasana telefaona amin'ity faritra ity dia tsy hitoviana amin'ireo maodely Android hafa, satria tsy hanana fampiharana mitovy na hiditra amin'ny kaonty Google izahay, toy ny hita hatreto. Na dia manome antoka aza ny orinasa fa ireo Huawei Mate 30 ireo hifanaraka amin'ireo rindranasa toa ny YouTube, Gmail na Google Maps izy ireo. Izy ireo ihany no tsy ho tonga apetraka amin'ny toerana misy anao ary amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny fomba izay homena ny mpampiasa hahafahan'izy ireo miditra amin'izy ireo.
Raha vao apetraka ny rindranasa dia mandeha ara-dalàna amin'ny telefaona ny zava-drehetra, toy ny fanaontsika taloha. Ny fisalasalana hatreto dia ahoana no ahafahanao manana Google Play Services na Google fampiharana amin'ny iray amin'ireo fitaovana ireo. Ity dia zavatra iray izay noheverina ankehitriny, araka ny nolazain'izy ireo tamin'ny mpanamboatra azy ihany, ka afaka herinandro vitsivitsy dia tokony hisy mazava kokoa momba izany.
Inona no ananan'ny Huawei Mate 30?
Ny tsy fisian'ny Google Play Services sy ny Google fampiharana dia manampy amin'ny serivisy manokana. Mamela antsika amin'ny HSM (Huawei Mobile Services) ny orinasa amin'ny telefaona roa, ankoatry ny fananana fivarotana fampiharana azy, App Gallery. Famatsiam-bola lehibe iray no ataon'ny orinasa hanitarana ny isan'ny fampiharana ao aminy, maherin'ny 11.000 ankehitriny, mba hahafahan'ny mpampiasa manana an'ity Huawei Mate 30 ity miditra aminy.
Ho fanampin'izay, hatramin'ny nanasoniavana dia voamarina fa HSM mahatafiditra ny fampidirana ny GSM, GPS ary ny sari-taninao manokana. Ka ny serivisy ilaina amin'ny telefaona Android dia tsy ho diso amin'ireo maodely ireo. Azo inoana fa hampiasa ny sari-taniny manokana ilay orinasa, izay efa nambaran'izy ireo fa mivoatra ary ho ofisialy amin'ny volana oktobra. Karazana Google Maps, fa avy amin'ilay orinasa ihany.
Ny sasany amin'ireo fampiharana mahazatra amin'ny Android dia hosoloina ihany koa. Io hidin-trano io dia manakana ny Google Assistant tsy hampiasaina amin'ny telefaona. Noho izany, namela anay Huawei Assistant ny orinasa, mpanampy an'ireo Huawei Mate 30 ireo, izay hamatsy ireo asa maro izay efa fantatsika amin'ny mpanampy Google matetika. Afaka manao hetsika amin'ny telefaona ianao, toy ny antso, mamaky hafatra, manokatra rindranasa na maro hafa. Na dia tena azo inoana aza fa tsy hanana ny fihetsika na ny fiasa rehetra omen'ny mpanampy Google mahazatra antsika.
Android Source Open
Ny fiovana lehibe hafa ao amin'ny Huawei Mate 30 dia ny fampiasana loharano misokatra Android. Ny fanakanana an'i Etazonia dia manery azy ireo hampiasa ny ampahany misokatra amin'ny rafitra fiasa, azon'ny rehetra te hampiasa azy io. Raha omen'izy ireo ny EMUI 10, ny sosona fanaingoana azy io, hahazoana ny traikefa efa mahazatra antsika amin'ny Android.
Ireo mpampiasa dia tsy mila miahiahy momba ny fanavaozana amin'ity tranga ity, satria loharano misokatra Android, ao amin'ny kinova 10, hahazo fanavaozana ny fiarovana amin'ny fotoana rehetra. Ka ny telefaona dia ho voaro amin'ny fandrahonana. Ny kinova amin'ny rafitra fiasa ho avy koa dia horaisina, amin'ity kinova loharano misokatra ity, tsy misy fampiharana Google.
EMUI 10 interface dia havaozina ihany koa, azo antoka fa hifindra amin'ny EMUI 11 amin'ny taona ho avy. Amin'io lafiny io dia tsy tokony hisy fiovana be loatra raha oharina amin'ireo kinova teo aloha.
HarmonyOS amin'ny maha rafitra miasa azy
Tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra dia nanolotra ny rafitra fikirakirany manokana i Huawei. antsoina hoe HarmonyOS. Ny marika sinoa dia mikasa ny hampiasa azy amin'ny karazana fitaovana maro, fa indrindra eo amin'ny sehatry ny Internet of the Things. Ka zavatra hitantsika amin'ny vokatra toy ny fahitalavitra, mpandahateny sy ny maro hafa izany. Tsy azo lavina ny fampiasana azy amin'ny telefaona.
Na dia mbola tsy vonona hampiasa finday aza i HarmonyOSIzany no antony tsy nahatongavany tao amin'ny Huawei Mate 30. Nilaza ny marika sinoa fa ny laharam-pahamehany dia ny fampiasana Android, fa ny fampiasana an'ity rafitra miasa ity dia zavatra dinihina ihany koa. Na dia misy aza ny haino aman-jery sasany miresaka momba ny fampiasana an'ity rafitra ity dia mety maharitra roa taona ny tetezamita. Ka zavatra mety azo andehanana izany, saingy mila fotoana fohy vao ho ofisialy ihany.
Tsy tokony hihoarantsika fa amin'ny ho avy tsy ho ela dia hampiasa io rafitra miasa io amin'ny telefaona marika izy. Indrindra raha mijanona ho ratsy ny fifandraisana amin'i EtazoniaSaingy manandrana mampiasa Android amin'ny findainy foana ilay marika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Ny Huawei Mate 30 tsy misy fampiharana Google: Izay rehetra tokony ho fantatrao
AUKEY dia manome lozisialy maranitra dimy ho an'ny finday sy laptop
Huawei Watch GT 2: ofisialy ny rindrambaiko vaovao an'ny marika